Malunga Nathi - Ezong Group
Iqela le-Ezong lasekwa okokuqala ngo-1996. Ikomkhulu lenkampani likwidolophu yaseDali, kwiSithili saseNanhai, kwisiXeko saseFoshan. Ikhethekileyo kushishino lwegumbi lokucoca iminyaka eyi-26, i-Ezong iye yaba lishishini eliphambili le-aluminium ecocekileyo kunye neengcango ezicocekileyo kunye neWindows eTshayina.
Iqela le-Ezong linamasebe amathandathu kunye neziseko zokuvelisa, kuquka i-Guangzhou Yizhong, isiseko sokuvelisa iSanshui kunye neNanhai Clean Door Business Unit njalo njalo. Imveliso igubungela indawo engaphezulu kwe-30,000 yeemitha zesikwere kwaye ixabiso lemveliso yonyaka lifikelela kwi-800 yezigidi zeeyuan. Ezong ikwasisiqinisekiso sesizwe samashishini obuchwepheshe obuphezulu kunye neshishini elithembekileyo, elinamalungelo awodwa abenzi anxulumeneyo angaphezu kwama-45.
I-Ezong ibonelele ngezisombululo zenkqubo kubathengi abangaphezu kwe-3000, njengezibhedlele ezidibeneyo zeYunivesithi yase-Sun Yat-sen, i-Guangzhou Respiratory Centre, i-People's Hospital yase-Guangdong kwiphondo, kunye nezibhedlele ezidibeneyo ze-Guangzhou Medical University...
Iimveliso zethu zithunyelwa kumazwe angaphezu kwama-47 kunye nemimandla efana neYurophu, eMelika, kuMbindi Mpuma, eMzantsi-mpuma Asia...
I-DoorCleanroom.com yeyeqela le-Ezong.
Ngoku, iQela le-Ezong line-Ezong, i-konros, i-yijiemen kunye nezinye iimpawu.
Iqela le-Ezong linamasebe amathandathu kunye neziseko zokuvelisa, kuquka i-Guangzhou Yizhong, isiseko sokuvelisa iSanshui kunye neNanhai Clean Door Business Unit njalo njalo. Imveliso igubungela indawo engaphezulu kwe-30,000 yeemitha zesikwere kwaye ixabiso lemveliso yonyaka lifikelela kwi-800 yezigidi zeeyuan.
I-Dream Ezong yabona amathuba oshishino lwamaxesha kwaye yaqala ukusebenzisa iiprofayili ze-aluminium ze-tuyere e-Guangzhou, eyaqala ukumila.
Ukucingisisa Ukuze kuhlangatyezwane ngcono neemfuno zabathengi, i-Ezong ityale imali kwimveliso yeeprofayili ze-tuyere mveliso kunye nezixhobo zokubumba, kwaye yavula isebe laseBeijing.
Uphuhliso lwe-Ezong lutyala imali engaphezulu kwesigidi esinye kuphando nakuphuhliso kunye noyilo minyaka le, kwaye uphumelele isiqinisekiso senkqubo yolawulo lwe-ISO9001.
Ithuba Ngokusemthethweni lingene kushishino lwe-aluminium yonyango, luphuhliswe ngokuzimeleyo kwaye luyilwe iingcango zesibhedlele kunye nemveliso yegumbi elicocekileyo, laseka isebe lezoshishino elicocekileyo eFoshan, kwaye lakha isiseko semveliso yeehektare ezingamakhulu eSanshui.
Iqela le-Ezong elivuthiweyo lisungulwe iQela le-Ezong, elinemveliso egubungela uluhlu olupheleleyo lweengcango kunye neefestile ezicocekileyo, iiprofayili ezicocekileyo, iifestile, iikhabhathi, njl. Iziza zefektri zigubungela iFoshan, Taishan, Zhongshan, Guizhou, njl. ngaphezu kwama-300 eehektare.
I-Breach Ezong yazi kakuhle ukuba umgangatho obalaseleyo kunye netekhnoloji ekhokelayo zisisiseko sobomi bomntu. Ngo-2018, iimveliso ziqokelele ngaphezu kwe-40 imodeli ye-patent esebenzayo kunye nezatifikethi zokuyila i-patent. Iimveliso zibonwa ngokubanzi yimarike kwaye ibe yinkokeli ye-aluminiyam ecocekileyo yaseTshayina kunye neengcango ezicocekileyo kunye neefestile.
Thatha i-Ezong ibambe amathuba ehlabathi kwaye iimveliso zithengisa kakuhle kwihlabathi liphela. Iye yaba ngumboneleli okhethwayo wendawo ecocekileyo kwizibhedlele ezininzi zasekhaya kunye nezamazwe ngamazwe eziphezulu/iinkampani zokuvelisa.ic kunye nezibhedlele eziphezulu zamazwe ngamazwe/iinkampani zokuvelisa.
Iqela le-Ezong liphumelele amalungelo awodwa omenzi wechiza angaphezu kwama-40, kuquka amalungelo awodwa omenzi wechiza ama-2 kunye namalungelo awodwa omenzi wechiza angaphezulu kwama-20.
Ukusungula izinto ezintsha kunye nobuchwepheshe sisiseko sophuhliso lwamashishini. Ukuza kuthi ga ngoku, iqela le-Ezong linamalunga nama-50 iinjineli eziphezulu zobunjineli.
Ibhodi eKhethekileyo yeFormica Anti-fold
Umtya wokutywina we-Silicone
I-6063-T5 i-aluminiyam yokuqala
Ukuzaliswa kwe-Aluminiyam yobusi
Izixhobo zokutshiza ezizenzekelayo
Iimveliso ze-Ezong zithunyelwa e-United States, e-Indonesia, eBrazil, ePakistan, eNigeria, eRashiya, eMexico, kwiiPhilippines, e-Egypt, eVietnam, eJamani nakwamanye amazwekazi amathandathu, kunye namazwe angama-47 ewonke, enza igalelo kwihlabathi lenziwe eFoshan. kwaye yenziwe eTshayina.
Isikhululo sezempilo samazwe ngamazwe saseGuangzhou Iziko lokuphefumla laseGuangzhou Isibhedlele saBantu sePhondo laseGuangdong Isibhedlele sokuqala esiManyaniswe neYunivesithi yaseSun Yat sen Isibhedlele saseSun Yat Sen seSikhumbuzo seYunivesithi yaseSun Yat sen
ISibhedlele seSithathu esiManyaniswe neYunivesithi yaseSun Yat sen Isibhedlele sase-West China seYunivesithi yaseSichuan IKholeji yesiBini yaseXiangya yeYunivesithi yaseCentral South Isibhedlele somhlaza saseYunnan I-NIC yaseBrunei